ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူတစ် ဦး တည်းတွင် China Feeding & TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်း | Baiyi
ထုတ်ကုန်အမည်: စံ TTO လမ်းခွဲ
စံပြ BY-TF01-TTO; BY-TF01 / 02-TTO-A; BY-TF01 / 02-TTO-B; BY-SF01-TTO (၄ မျိုး)
အသွင်အပြင်:Standard TTO လမ်းခွဲသည် TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းနည်းပညာနှင့်အသိဥာဏ်ရှိသည့်နို့တိုက်ကျွေးရေးနည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ထားပြီးအလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်းနှင့်အပူပုံနှိပ်ခြင်းကိုအပြည့်အဝနားလည်သည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ပလပ်စတစ်အိတ်များ (ပလပ်စတစ်အိတ်များ၊ တံဆိပ်များ၊ အဖုံးအုပ်များစသည်တို့အပါအ ၀ င်) တွင်ပုံနှိပ်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်အမျိုးမျိုးသောဘားကုဒ်နံပါတ်၊ QR ကုဒ်နှင့် Multi-line ကြီးသောအကြောင်းအရာပါပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်ပုံနှိပ်နိုင်သည်။ တင်သွင်းသောထုပ်ပိုးခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဆေးဝါး၊ ဓာတုပစ္စည်း၊ အစားအစာစသည်ဖြင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုထားသောအနုပညာနှင့်တိကျမှု။
Feeding & TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းတစ်ခုလုံးသည်ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီတွင် TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အသိဥာဏ်ရှိသောအစာကျွေးခြင်းနည်းပညာ၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်းနှင့် TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်း၏ကောင်းမွန်သော coding ကိုသဘောပေါက်ပြီး TT အပူပရင်တာအမျိုးမျိုးဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပလတ်စတစ်အိတ်များ၊ စက္ကူများ၊ တံဆိပ်များစသည်တို့အတွက်ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများအတွက်ဖြစ်သည်။ ဖဲကြိုးကိုအလွှာကိုပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဂန္ထဝင်“ အဆင့်သုံးဆင့်” ဒီဇိုင်းပုံစံ: ၁， ​​အလိုအလျောက်တိုက်ကျွေးခြင်း； ၂， TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်း； ၃， Hopper တွင်စုဆောင်းခြင်း； ရိုးရိုး layout၊ လည်ပတ်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလွယ်ကူခြင်း၊ စျေးကွက်တွင်လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်အရအမျိုးအစား ၄ မျိုးရှိသည်။ ၁။ ဂန္ထဝင်အစာကျွေးခြင်းနှင့် TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းတစ်ခုလုံး၊ မော်ဒယ်: BY-TF01-TTO; ၂။ Standard A နို့နှင့် TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းတစ်ခုလုံး၊ အမျိုးအစား A၊ ပုံစံ - BY-TF01 / 02-TTO-A; 3. Standard နို့တိုက်ကျွေးမှုနှင့် TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းတစ်ခုလုံး၊ အမျိုးအစား B၊ ပုံစံ - BY-TF01 / 02-TTO-B； ၄ feeding ပုံမှန်နို့တိုက်ကျွေးမှု & TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းတစ်ခုလုံး၊ မော်ဒယ် - BY-SF01-TTO
၁။ မော်ဒယ်တစ်ခုတည်းတွင် "ဂန္ထဝင်အစာကျွေးခြင်းနှင့် TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်း: BY-TF01-TTO" ၏စက်ကိုယ်ထည်သည်သံမဏိသို့မဟုတ်ကာဗွန်သံမဏိဆေးများကိုအသုံးပြုသည် (အရောင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်) ။ အမျိုးမျိုးသောပွတ်တိုက်အားဖိအားပေးသည့်ခါးပတ်နှင့်အမျိုးမျိုးသောပွတ်တိုက်မျက်နှာပြင်ခါးပတ်များတပ်ဆင်ထားသောအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းနှင့်အရွယ်အစားပလပ်စတစ်အိတ်များအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်အောင်စားသောစွမ်းအားအဖြစ်တစ်ခုတည်းပွတ်တိုက်အားခါးပတ်သည်ထုတ်ကုန်အရွယ်အစားသည် ၈၀ မီလီမီတာမှ ၄၀၀ မီလီမီတာအထိရှိနိုင်သည်။ Classic roll သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းနှင့် embedded TTO အပူပရင်တာ installation ၏တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းနှစ်ခုသည်အပြင်ဘက်ပေါ်ကိုသယ်ဆောင်ရန်ဖိအားပေးသည့်ခါးပတ်များတပ်ဆင်ထားသောကြောင့်ထုတ်ကုန်များသည်အစားအစာများမှအစပုံနှိပ်areaရိယာအထိတည်ငြိမ်စေသည်။ အဘယ်သူမျှမစလစ်မရှိ offset နှင့်ထိရောက်မှုစုံလင်။
၂။ "Standard feed & TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းတစ်ခုလုံး၊ Type A" သည်နို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့် TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းအပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ တစ်ခုတည်းရှိအစာကျွေးခြင်းကိရိယာအဖြစ်အသိဉာဏ်လမ်းခွဲသည်။ ဂီယာအစိတ်အပိုင်းများသည်ထူးခြားသော“ roll & belt” နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းမှအပစက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်။ ဥပမာ - တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ inkjet ပုံနှိပ်ခြင်း၊ လေဆာရောင်ခြည်ကုဒ်ထုတ်ခြင်း၊ OCR ထောက်လှမ်းခြင်း၊ အလိုအလျောက်ငြင်းပယ်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်စုဆောင်းခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဂီယာအတွင်းရှိလေဟာနယ်စုပ်ယူမှုစနစ်နှင့်ပေါင်းစပ်။ ၎င်းသည်စက်တစ်ခုတည်းတွင်နည်းပညာအမျိုးမျိုးကိုပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
၃။ "Standard feed & TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းတစ်ခုလုံး၌အမျိုးအစား B" သည်အသိဉာဏ်လမ်းခွဲကိုအစာကျွေးသောကိရိယာအဖြစ်လက်ခံသည်။ Standard A နှင့် TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွာခြားချက်အမျိုးအစား A သည် roller transmission နည်းလမ်းကိုမကျင့်သုံးခြင်းနှင့်အကြီးမားဆုံးဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်စမ်းသပ်မှုဖြစ်သည့် TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းကိုသဘောပေါက်သည်။ TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းအောက်ရှိ bearing roller ကိုအထူးပြုလုပ်သော conveyor belt ဖြင့်အစားထိုးသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အခြားတိုးချဲ့ထားသောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုထောက်ပံ့ရုံသာမကပုံနှိပ်ခြင်း၏တိကျမှုကိုလည်းများစွာမြှင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအနေအထားသွေဖည်± 0.2mm အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်ပုံနှိပ်ခြင်းမြန်နှုန်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တည်ငြိမ်မှုအားလုံးသည်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုရှိသည်။
၄။ ပုံမှန်အစာကျွေးခြင်းနှင့် TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးရှင်းဆုံးနှင့် TTO အပူပုံနှိပ်စက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်ပွတ်တိုက်အားတိုက်ကျွေးမှုစနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးပလပ်စတစ်အိတ်များအတွက်သင့်တော်သော roller & belt transmission နည်းလမ်းနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ စစ်ဆင်ရေးလွယ်ကူ & ချွေတာ။ ယင်း၏ထိန်းချုပ်မှုတွင်မော်တာတစ်မျိုးနှင့်တစ်ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းမြန်နှုန်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိပြီး No PLC (သို့) HMI သည်ရှုပ်ထွေးသောလူသား၏လုပ်ဆောင်မှုကိုချန်လှပ်သည်။ တင်ပို့ရန်အဆင်ပြေလွယ်ကူသောခန္ဓာကိုယ်။
၁။ ဂန္ထဝင်အစာကျွေးခြင်းနှင့် TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းတစ်ခုလုံး
၂။ Standard A နို့တိုက်ကျွေးမှုနှင့် TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းအားလုံးကိုအမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းတွင်အသုံးပြုသည်
၃။ Standard B အစာနှင့် TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းအမျိုးအစားတစ်ခုလုံး B
အားလုံးပုံမှန်တကျက်စားခြင်းနှင့် TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်း
အေအတိုင်းအတာ: L ကို * W * H ကို = 1350 * 800 * 1230mm
ခအလေးချိန် - ၁၀၀ ကီလိုဂရမ်ခန့်ရှိသည်
Power စွမ်းအား - 1KW ခန့်ရှိသည်
အီးခါးပတ်ပြေးမြန်နှုန်း: 0-50m / min
အက်ဖ်ထိန်းချုပ်မှု: PLC + HMI; နှစ်ဆကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်နှစ်ဆ DC က brushless မြန်နှုန်းစည်းမျဉ်း
G. အလေ: မလိုအပ်ပါ
အိပ်ချ်နို့တိုက်ကျွေးရေးနိယာမ: ဂန္ပွတ်တိုက်, button ကိုနို့တိုက်ကျွေးရေး
ဗြဲဂီယာနည်းလမ်း: roller နည်းလမ်း
J. ရရှိနိုင်သောထုတ်ကုန် - အိတ်များ၊ တံဆိပ်များ၊ စက္ကူစသဖြင့်ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်း
K. ရရှိနိုင်သောထုတ်ကုန်အရွယ်အစား: L * W * H = (60-300) * (60-400) * (0.1-1) mm
အယ်လ်ထိရောက်သောပုံနှိပ်အကျယ်ညှိနှိုင်းမှုအကွာအဝေး - ၃၀၀mm (လက်ကိုင်ညှိနှိုင်းခြင်း)
အမ်စက်ကိုယ်ထည် - သံမဏိသို့မဟုတ်ကာဗွန်သံမဏိပန်းချီ (အရောင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်)
N. installation နည်းလမ်း: Off-line ကြမ်းပြင် - မတ်တပ်ရပ်ခြင်း
O. optional function ကို: အော်တိုစုဆောင်းခြင်း, OCR, အလိုအလျောက်ငြင်းပယ်ခံရ။
၂။ တစ်ခါသုံးမျက်နှာမျက်နှာဖုံး၏နို့တိုက်ကျွေးမှုနှင့်ဖြန့်ဝေမှုအစာကျွေးခြင်းနှင့် TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းအားလုံးသည်အမျိုးအစား A တစ်ခုတည်း
A. အရှုထောင့်: L * W * H ကို = 2270 * 760 * 820mm (မှတ်ချက်: ပေါ်ကိုခါးပတ် width385mm, အရှည်: 1200mm)
ခအလေးချိန် - 200KG ခန့်ရှိသည်
Power ပါဝါ - ၁.၅ ကီလိုဝပ်နာရီ (လေဟာနယ်စုပ်စက်အပါအဝင်)
G. လေ: မလိုအပ်ပါ
ဗြဲဂီယာနည်းလမ်း: ခါးပတ်နှင့်အတူ roller
J. ရရှိနိုင်သောကုန်ပစ္စည်း။ ထုပ်ပိုးသည့်အိတ်များ၊
K. ရရှိနိုင်သောထုတ်ကုန်အရွယ်အစား: L * W * H = (60-300) * (60-380) * (0.1-1) mm
အယ်လ်ထိရောက်သောပုံနှိပ်နိုင်သည့်အကျယ်: 300mm (လက်ကိုင်ညှိနှိုင်းမှု)
N. တပ်ဆင်နည်း - ကြမ်းပြင်နှင့်အော့ဖ်လိုင်း
O. optional function ကို: တံဆိပ်ကပ်ခြင်း, OCR, အလိုအလျောက်ငြင်းပယ်ခံရ, အလိုအလျောက်စုဆောင်းခြင်း။
အေရှုထောင့်: L * W * H = 2270 * 760 * 820mm (မှတ်ချက် - စံပေါ်တင်ခါးပတ်အကျယ် ၃၈၅mm၊ အရှည် ၈၀၀mm)
ဗြဲဂီယာ: အဘယ်သူမျှမ roller
L. ထိရောက်သောပုံနှိပ်နိုင်သည့်အကျယ်: ၃၀၀mm (လက်ကိုင်ညှိနှိုင်းမှု)
3.4all ပုံမှန်အစာကျွေးခြင်းနှင့် TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းတစ်ခုလုံးအားလုံးကို
အေရှုထောင့်: L * W * H = 1525 * 600 * 760mm (မှတ်ချက် - standard conveyor belt width 330mm, အရှည် 600mm)
C. ဗို့အား: 220VAC 50 / 60HZ ။
K. ရရှိနိုင်သောထုတ်ကုန်အရွယ်အစား: L * W * H == (60-300) * (60-330) * (0.1-1) mm
အယ်လ်ထိရောက်သောပုံနှိပ်ခြင်းအကျယ် - 200mm (လက်ကိုင်ညှိနှိုင်းမှု)
N. တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း - ကြမ်းပြင်နှင့်အော့ဖ်လိုင်း။
O. optional ကို function ကို: အဘယ်သူမျှမ။
အသိဉာဏ်ရှိသောလေဟာနယ်ကောက်ယူခြင်း၊ ပစ္စည်းသွင်းခြင်းနှင့် ...